पेटमा बच्चा छ भनेर एक युवतीले टर्चर दिइन् : पुष्प खड्का
पुष्प खड्का नेपाली चलचित्र उद्योगमा चिनिएको नाम हो । थोरै चलचित्र खेले पनि हिट चलचित्र दिएका छन् उनले । केहि महिनाअघि एक चलचित्रमा ३० लाख पारिश्रमिक मागेको भनेर चर्चामा आएका उनको पछिल्लो समय चलचित्र ‘मारुनी’ प्रदर्शनमा आयो । दर्शकले मन पराए । यसपटक पुष्पसँग हामीले चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरेका छैनौं, उनीसँग चलचित्रको घेराभन्दा बाहिर रहेर रमाइलो गफ भएको छ । रमाइलो गफमा पुष्प निकै खुलेका छन् । प्रस्तुत छ, रामजी ज्ञवालीले गरेको रोचक गफगाफ ।
जिन्दगी कस्तो चल्दैछ ?
पहिले भन्दा राम्रो छ । सोचेजस्तै भैरहेको छ ।
के सोच्नुभएको थियो ?
सोचेका त धेरै कुरा थिए । खासमा हाम्रा सोचहरु समयको रफ्तारसँगै परिवर्तन हुँदारहेछन् ।
चलचित्रको हिरो रियल लाइफमा के महशुस गर्नुहुन्छ ?
मैले धेरै काम गर्नु छ । चुनौतीहरु छन्, चुनौतीका वाबजुद संघर्ष गर्नुछ । आफुलाई समय अनुकुल परिवर्तन गर्नुछ । बाँकी त सबै कुरा समय अनुसार हुँदै जाने कुरा हुन् ।
महिलालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
जो बिना श्रृष्टीको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
महिलाहरुकै कारण जीवनमा कत्तिको सफलता मिलेको छ ?
एकदमै । मेरो करिअरमा महिलाहरुको ठुलो प्रभाव परेको छ । पहिलो चलचित्र अझै पनिमा पुनम दिदीले अवसर दिनुभयो, अर्को चलचित्र दर्पण छायाँमा साबु कदाल कार्कीले महत्वपुर्ण भुमिकामा मलाई छान्नुभयो । अर्को हिट चलचित्र मंगलममा शिल्पा पोखरेलजीसँग सहकार्य गर्न पाएँ । यो भन्दा अघि पनि विभिन्न काममा महिला साथिहरुको सहयोग र साथ पाएको छु । बास्तबमा मेरो जीवनमा महिलाहरुको प्रभावले धेरै सफलता मिलेको छ ।
जीवनमा पहिलोपटक देखेको महिला ?
स्कुल पढ्ने बेलाको असाध्यै मिल्ने साथी ?
मेरो दिदी कमला । त्यतिबेला त कहाँ अरु केटिहरुसँग संगत गर्न पाइन्थ्यो र ?
अहिलेसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा सहयोगी महिला को भेट्नुभयो ?
आमा । साथै, मेरो एकजना लेडिज साथी हुनुहुन्छ । उहाँ पनि हो ।
उहाँ भनेको को हो ? खुलाउन मिल्छ ?
एकजना असाध्यै मिल्ने लेडिज साथी हो, उहाँको नाम नभनौं है !
उहाँको नाम नभन्नुस् तर उहाँको भुमिका के हो खुलाइदिनुस् न ?
आमा पछि सवैभन्दा धेरै माया गर्ने लेडिज हो ।
उहाँ तपाईँको प्रेमिका हो ?
अहिले यस विषयमा धेरै नखुलाऔं न ।
सबैभन्दा धेरै माया लाग्ने मान्छे को हो ?
कस्ता मान्छे असाध्यै मन पर्दैन ?
अनावश्यक एटिच्युड देखाउने । यो विषयमा महिलाहरु धेरै देखिएका छन् ।
तपाईँको सपनामा सधैँ आइरहने कोहि मान्छे ?
उहि मेरो लेडिज साथी नै हो ।
कल्पनामा को आउँछ ?
प्रियंका चोपडा ।
पहिलोपटक डेट कहिले जानुभयो ?
११ कक्षामा पढ्दाको समय हो, एकजना युवती (ममता) असाध्यै मन पथ्र्यो । एकपटक उनीसँग गफ गर्दै जाँदा धेरै टाढा पुग्यौं । बदाम किनेर एउटा चौरमा घण्टौं बस्यौं ।
त्यो प्रेम थियो ?
प्रेम थियो । तर, भर्खरै सुरुवातको।
किन टिकेन त्यो प्रेम ?
दुवैको मन टाढा भयो । अलिकति आफ्नै कारण, अलिकति उनको कारण ।
आजसम्म कति युवतीलाई लभ लेटर लेख्नुभयो ?
यो कैलाली हुँदाको समय हो । एक जना युवतीलाई लेखेको याद छ, त्यसपछि कहिल्यै लेखेको याद छैन । खासमा माओवादी द्वन्द्वकालको समय थियो । घर नजिकै सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो । त्यो भिडमा एक युवतीसँग आँखा जुध्यो । त्यसपछि परिचय भयो । उनले दिएको ठेगानामा केहि हप्तापछि मैले चिट्ठी पठाएँ । त्यतिबेला फोन, इन्टरनेट थिएन । त्यो लेटरको जवाफ कहिले आउला भनेर महिनौसम्म कुरें । तर, त्यो लेटर सम्बन्धित मान्छेलाई पुग्यो या पुगेन थाहा भएन । जवाफ पनि आएन । सायद, कसैको जवाफमा सवैभन्दा धेरै समय कुरेको छु भने त्यहि एउटा घटना हो ।
अविवाहित ह्याण्डसम मान्छे, बिहेको प्रस्ताव कत्तिको आउँछ ?
आइरहेको हुन्छ ।
स्वीकार्ने किसिमका युवतीको प्रस्ताव नआएको हो कि ?
कसैको के मन पर्दैन, कसैको के त्यस्तै त्यस्तै छ ।
तपाईं त गहिरो प्रेम सम्वन्धमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हो कि ?
थोरै खुलाइदिनुस् न, तपाईँले नाम खुलाउन मन नलागेकी जो महिला छिन्, उनीसँग कहिलेदेखि अफेयर चलिरहेको होला ?
अहिलेसम्म म सिंगल छु भनिरहेको छु मिडियामा । खासै यो खुलाउनु ठिक पनि होइन क्या ।
हाहाहा.., आज पहिलोपटक खुलाउनुस्, प्रेमीकाको बारेमा ?
निकै माया लाग्छ । निकै क्युट छिन् । धेरै बुझ्ने स्वभाव छ । हामी ६ बर्षदेखि सँगै एउटा यात्रामा छौं । धेरै टाढाको यात्रा तय गरेका छौं, हेरौं भविष्यमा के हुन्छ ।
प्रेमिकालाई तपाइले राख्नुभएको उपनाम के हो ?
गोलु र कुद्दु भनेर बोलाउँछु ।
तपाईंको गोलुले दिएको पहिलो र पछिल्लो गिफ्ट ?
पहिलो गिफ्ट अथवा उपहार गुलाब थियो, पछिल्लो आइफोन ।
पहिलोपटक प्रेम सम्बन्धका बारेमा खुलाएकोमा धन्यवाद । संसारमा कोहि महिलासँग डेट जान मन छ भने को होला ?
प्रियंका चोपडा । मलाई असाध्यै मन पर्छ ।
२४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै कुरा हुने महिला ?
मेरो गोलु (हाहाहा...)
सवैभन्दा मन पर्ने अभिनेत्री ?
आलिया भट्ट ।
तपाईंले काम गरेका मध्येकी सवैभन्दा राम्रो लागेको अभिनेत्री ?
झरना बज्राचार्य ।
जिन्दगीभरि बिर्सन नसकिएको कुनै युवतीसँगको त्यस्तो सम्वन्ध ?
यो धेरै बर्षअघिको कुरा हो । नेपालगन्जदेखि पश्चिम जाँदै थिएँ । एक युवतीसँग गाडीमा भेट भयो । रातको समय थियो । उनलाई धेरैले आँखा लगाइरहेका थिए । मलाई धेरैले जिस्काएको मन परेन । अनि उनलाई सोधेर म सँगै नजिक राखेँ । अनि, सँगै यात्रा ग¥यौं । रात पर्दै गयो, द्वन्द्वकालको समय थियो । बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको थियो । कर्णाली पुगेपछि गाडी अगाडी जान नपाउने कुरा आयो । यतिबेलासम्म सबै ठिकठाकै थियो । गाडी नचलेपछि अब होटलमै बास बस्नुपर्ने भयो । अरु धेरैले होटल वुक गरे, हामीले पनि खोज्यौं । अन्तिममा एउटा होटल पाइयो, त्यो पनि एउटा बेड भएको । एउटा बेडमा सुतौं भने श्रीमती होइन, प्रेमिका होइन । नसुतौं भने अरु होटल पाइएन । बाध्य परेर हामीले त्यस बेला रुम मात्रै शेयर गरेनौं, बेड समेत शेयर ग-यौ ।
त्यसपछि घटनाक्रम कसरी अघि बढ्यो ?
अचम्मको कुरा के भयो भने, हामी दुवैजनाको कुनै किसिमको सम्वन्ध भएन । यात्रामा भेटिएको साथीसँग त्यस्तै किसिमको सम्वन्ध निभाउन सकियो । बिहान गाडी चल्यो । हामी आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यौं ।
उनीसँग पछि कुरा हुन्थ्यो ?
केहि भएन । उनी आफ्नो बाटो लागिन्, म आफ्नो बाटो लागें ।
जिन्दगीमा कुनै युवतीले व्ल्याकमेल गरेको याद छ ?
एकपटक त्यस्तो क्षण छ । उसको नाम नभनौं । एकजना लेडिज साथी हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग खासै धेरै नजिकको सम्वन्ध त थिएन । तर, मलाई भित्रभित्रै मनमनै मन पराउनुभएको रहेछ । एकपटक त उहाँले मलाई फसाउने नियतले पेटमा बच्चा छ, विहे गर्ने कि नगर्ने भन्दै मलाई टर्चर दिनुभयो । पछि मैले उनको परिवारसँग सल्लाह गरेर सवै भनिदिएपछि उनि टर्चर दिन छोडिन् ।